SIDA LOO ILAALIYO DABACASAHA MAQAASIINKA DIIRAN: TILMAAMAHA, WAA MAXAY KU HABOONAANTA MUDDADA DHEER, IYO SIDOO KALE WAX YAR OO KU SAABSAN SIFOOYINKA WANAAGSAN EE KHUDRADDAAS - KHUDRADDA
Bannaanka u badan ayaa xiiso leh sida loo keydiyo dabacasaha diirimaad diiran. Karootada waa khudrado caan ah, faa'iidooyinka taas oo aan la ogeyn oo kaliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale carruurta. Laga soo bilaabo waxa aad cuni kartaa maraq, saxan weyn iyo xitaa keega.
Carrot waa warshad qashin biyood ah oo ka tirsan qoyska celery. Waxay gaadhi kartaa height ah 30 cm, waxay leedahay laba jeer iyo caleemo caleemo ah. Petioles waa laga saari karaa. Flowers ku urursan dallad, iyo sida falalka miro dvusemyanka.
Qodobbada waxtarka leh ee khudraddaas
Bannaanka u badan oo u eg sida khudradda cagaaran, gaar ahaan, xididadiisu waxay ka qiimo badan yihiin - waxay ku jiraan fitamiin A badan. Karootadu waxay ku habboon tahay karinta saladh ama cunto qasacadaysan xilliga jiilaalka. Waxaa fiican inaad beerta beerta - si aad u hubiso in aysan jirin wax lagu daro khudradda.
In khudradda this waxaa jira fitamiinada kooxo kala duwan - waxaa jira carotene. Maaddada noocan oo kale ah, oo ku jirta jidhka bini-aadanka, waxay ku soo noqotaa fitamiin A. Diyaarada waxaa ku jira borotiinka, karbohidratka, macdanta, iyo macdanta birta, potassium, fosfooraska, copper, cobalt, fluorine, zinc, nickel, iodine. Sidoo kale, waxaa jira saliidyo lagama maarmaan ah oo keena ur aan caadi ahayn.
Karootada, waxaa jira carotene beta, taas oo saameyn togan ku leh hawlgabka sanbabka. Waxay sidoo kale ka caawisaa xoojinta retina.
Suurtogalnimada kaydinta dheer
Dhammaan dabacasaha ma dabooli karaan kaydka - bannaanka u leh waayo-aragnimada ay ka ogaadaan waxa ku saabsan. Kaydinta waxay ku xiran tahay maaha oo keliya noocyada, laakiin sidoo kale xaaladaha hoos yimaada khudaarta ayaa koray, sida dalagga u go'ay oo loo diyaariyey kaydinta. Tusaale ahaan, noocyo goor dambe ma heystaan ​​wakhti ay ku ururiyaan tiro badan oo ah fiber iyo sonkor - waxaa lagu kaydiyaa si xun.
Noocyada soo socda waa kuwa ugu caansan waxayna ku habboon yihiin kaydinta muddada-dheer:
Jiilaal Noocyada xilliga dhexe, oo la keydiyo 12 bilood.
Shantane Dalagyada xididada leh ee macaan oo leh caraf udgoon. Lagu kaydiyaa 10 bilood.
Nantes. Dabacasaha hore - khudradda xididka ayaa lagu kaydiyaa ilaa 10 bilood.
Miyuu suurtogal ah in lagu badbaadiyo meel hoose oo diiran?
Dabcan waad awoodi kartaa. Hase yeeshee, waxaad u baahan doontaa inaad diyaariso diyaarinta asaasiga ah tan iyo guga. Waa lagama maarmaan in la nadiifiyo qashinka iyo hadhaaga alaabta. Badanaa waxa loo isticmaala "warankiilo" - xalkan ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo qolka wareegga wareegga 2 bilood ka hor inta aan la saarin khudaarta.
Taas ka dib, Maqsin waa hawo iyo lime caddaan leh qadar yar oo naxaas sulfate ah. Haddii ay ku jirto darbiyada darbiga ah, waxaad u baahan tahay inaad qallajiso garbahaaga iyadoo la adeegsanaayo dhuxulo kuleyl ah oo la kululeeyo brazier. Sare waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo xal khamriga iyo salicylic acid.
Maqaasi waa inuu leeyahay 2 qaybood - mid ayaa loo isticmaalaa inuu ku keydiyo miraha iyo khudradda, iyo kan kale ee pickles. Xilliga jiilaalka, heerkulku waa inuusan ka hooseyn 1 degree.
Xaalad muhiim ah - waxaa lagama maarmaan ah in la sii daayo Maqaar ka soo alaabooyinka bilaabmaya in lageeyo oo ay sii xumaato - habkan waxaa suurtogal ah in laga fogaado saamaynta burbur ku ah goosashada guud ahaan.
Siyaabaha iyo Talooyinka
Si aad u doorato habka ugu wanaagsan ee ilaalinta karootada ee Maqsin, hubi hababkaan:
Gacmuhu wuxuu abuuri karaa sanduuqyada kartoonada ama kuraasta qoryaha. Waa in aysan aheyn goobo, waxayna xiran yihiin daboolka. Sidaas awgeed karootada si taxadar leh ayaa loo dhigi doonaa, daboolay dabool leh oo lagu dhejiyay dhulka hoose ee 15 cm derbiga. Waxaad qaban kartaa sanduuqyada ku yaalla saldhigyada gaarka ah - sidaas darteed qoyaanka ka yimaada derbiyada kuma dhici doono. Habkani waxaa loo tixgeliyaa isafgarad, tan iyo sanduuqyo dhowr ah waxay si fudud u haboonaan doontaa ilaa 20 kg oo khudaar ah.
Waxaad karootada ku kaydin kartaa dhulka hoostiisa adigoo isticmaalaya diirka basasha. Sidaa darteed, basbaaska waxaa lagu duubaa bacaha waaweyn, kaas oo dabacasaha lagu dhajiyo ka dib. Doorka qashinka ayaa kuu ogolaanaya inaad ka hortagto khudradda qoyaanka iyo inaad ka ilaaliso in aad dhalisid sheyga waxyeelada leh. Bacaha waa in si adag loo xiraa, ka dibna gashataa sariiraha.
Isticmaalka dhoobada dhoobo waa hab kale oo wanaagsan oo lagu kaydiyo. Dalagyada rootiga waxaa lagu shubaa dhadday, kaas oo laga helay alwaax qoryo ah. Cirbadaha waxaa ku jira walxo gaar ah oo badbaadin kara karootada laga bilaabo kalluunka iyo cudurada. Khudaarta ayaa lagu ridayaa weel ku haboon, sida balka daboolka ah lagu shubay - suurtagal maaha inay sanduuqyada ku dhajiyaan dabaqa ama derbiyada.
Isticmaalidda ciidda iyo sanduuqyada, waxaad ku kaydin kartaa karootada muddo dheer. Kaliya ku rushee ciidda lakabyada iyo isku dhaji khudradda qaabka jeegareynta. Sidaa daraadeed walax kasta wuxuu yeelan doonaa qolkiisa. Baro wax badan oo ku saabsan sida loo kaydiyo dabacasaha carrada, waxaad ka heli kartaa halkan.
Cabbir qoyan iyo niyadjab ayaa lagu dari karaa, iyo walxaha ka soo baxa waxaa lagu shubaa sanduuq alwaax ah.
Karootada waxaa la dhigaa dherer weyn - sidaas ayaad u ilaalin kartaa ma aha oo kaliya casriga, laakiin sidoo kale dhadhan.
Xalka baruurta ayaa loo isticmaalaa si loo qoyo dhammaan xididada si gooni ah. Ka dib marka la qalajiyo oo la dhigo kaydinta dambe. Karootada rusheeyaa budada - si aad u baahatid 200 grams oo cawlaan. Isku dariddu ma oggolaan doonto jeermiska inuu ku dhufto.
Dhoobo dareeruhu waa habka ugu fudud ee ilaalinta karootada. Dhaqan kastaa waa la xalliyay xalka, ka dib markii ay la qalajiyey oo la dhigey sanduuqyada ama weelasha kale.
Waxaad baran kartaa siyaabooyin kale oo wax ku ool ah oo lagu keydiyo karootada mawduucyadan soo socda ee boggayaga internetka:
Hab fudud oo lagu kalsoonaan karo oo lagu keydiyo karootada bacaha, tusaale ahaan, sonkorta.
Habka ugu wanaagsan ee lagu keydiyo dabacasaha bacaha.
Doorasho aan caadi ahayn ee loogu talagalay dabacasaha.
Si loo badbaadiyo dhaqanka khudraddan, raac tilmaamaha si adag:
Diyaarso qaybta hoose. Nadiifi alaabooyinka da'da ah iyo jeermiska. Si aad tan u samayso, ka qaad cuntada iyo waxyaabaha kale ee qolka, ka dibna nadiifi saqafka, sagxadda iyo darbiyada oo ku daawee copper sulfate leh lime. Haddii ay lagama maarmaan tahay, ku dabool lakabka labaad.
Samee raajiyo aan ku haboonayn dabaqa ama derbiga. Waxaad isticmaali kartaa xaashiyaha tufaaxa ama kuraasta qoryaha. Waa muhiim in la hubiyo ugu yaraan fogaan 20 cm dhulka si looga hortago qoyaan ka soo galaya khudaarta.
Raadso oo diyaariso sanduuqyada kaydka ku haboon ee karootada. Waxaad ka dhigi kartaa naftaada laga bilaabo kuraasta qoryaha ama waxaad isticmaashaa kuwa diyaarka u ah oo aad ka iibsan kartid suuqa.
Dooro mid ka mid ah fursadaha kaydinta ee kugu habboon.
Si taxadar leh u dhig qaabka dhererka dhammaan sharciyada si uu u hayo dhammaan hantidiisa.
Marmar booqo maqaarka si aad u xakamayso habka kaydinta iyo, haddii loo baahdo, qaado tallaabooyin lagu ilaalinayo beergooyska.
Haddii ay lagama maarmaan noqoto, kaliya hoos ugu dhiga dhulka hoostiisa oo qaado inta badan karootiga sida aad u baahan tahay.
Si loo joojiyo horumarinta cudurrada, waxaad sanduuqyada sanduuqyada leh khudaarta sphagnum, jejebka, diirka basasha iyo xaabada geedaha. Guryahooda ayaa ka hortagaya horumarinta fangaska. Haddii aadan u hoggaansameynin tiknoolajiyada kaydka hal dhinac ama mid kale, karootiga ma awoodi doono in la keydiyo muddo dheer.
Waxaad u baahan tahay inaad u dhaqanto si waafaqsan shuruucda oo isku day inaad eegto xaaladda karootada muddada oo dhan. - sidaas darteed waxay u soo bixi doontaa si loo joojiyo horumarinta cudurada iyo dhibaatooyinka kale ee goosashada.
Dhammaystirida waxaa habboon in la ogaado in dabacasku yahay mid muhiim ah oo muhiim ah oo khudradda ka mid ah oo ay tahay in la cuno oo keliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale carruurta. Si fudud u dooro habka ugu wanaagsan ee lagu kaydin karo suxuuntaada sanadka oo dhan.
Sida loo bacrimiyo-aadanku guga, xagaaga iyo dayrta - waxaan soo bandhignaa siraha
Digaagga Maran: sifooyinka, talooyinka ku saabsan ilaalinta iyo taranka
Sida loo koro "Prince of Black", beeritaanka iyo daryeellidda "yaan" madow
Keta baaskiil ayaa laga helay ugaaratada xuduudaha Khabarovsk
Aynu ogaanno liana qurux badan oo ka soo jeeda America-kulaylaha - Ipomoea. Waxay noqon kartaa quruxda weyn ee beerta iyo degaanka. Liana uma baahna daryeel gaar ah, isla markaana si dhakhso ah u koraayo, ku faraxsan dhammaan xagaaga iyo inta badan dayrta oo leh ubaxyo badan oo dhalaalaya. Waxaan baranaynaa sida loo koro miraha ipomoea, waa maxay sifooyinka daryeelka ubaxa iyo sida loo isticmaalo naqshad dhuleed. Read More